इन्टेक डिसेम्बर १९८७ को ३० औं वर्षगांठ | We Nepali
इन्टेक डिसेम्बर १९८७ को ३० औं वर्षगांठ
वीनेपाली | २०७४ भदौ ७ गते १७:०७
अल्डरसट । सन् १९८७ डिसेम्बरमा भर्ती भएका ब्रिटिश गोर्खाहरुको समूह इन्टेक डिसेम्बर १९८७ ले ३० औं वर्ष पुगेको सुखद उपलक्ष्यमा अल्डरसट स्थित द प्यालेस हलमा एक कार्यक्रम गरेको छ । अध्यक्ष क्या. रि. राम बहादुर मल्लको संयोजकत्वमा गत शनिबार १९ अगष्टका दिन कार्यक्रम भएको हो ।
नेपालको ७५ जिल्लाबाट छानिएका १२५ जवानहरु पूर्व धरान र पश्चिम पोखरा ब्रिटिश क्यापबाट डिसेम्बर १९८७ सालमा भर्ती भएका थिए । उनीहरु पछि २२ हप्ताको कठोर प्रारम्भिक तालिम मलय ल्यान्स, सेकोङ्ग क्याम्प हङकङमा सकुशल पुरा गरि विभिन्न पल्टनमा सेवारत भए । उक्त नम्बरी गोर्खाहरुमा पहिलो पटक नयां हतियार एसए एटी राइफलको ट्रेनिङ लिएको समूहमा पर्दछ । तीन जना नम्बरी स्वर्गवास भइसकेका छन् ।
कार्यक्रममा दिवंगत नम्बरीहरुको चीर शान्तिको कामना गर्दै एक मिनेट मौनधारण गरिएको थियो । नेपाल र बेलायतको राष्ट्रिय गान पश्चात सबै भन्दा सिनियर र जुनियर क्रमशः गजबिर थापा र नरेश राईले संयुक्तरुपमा दीप प्रज्वलन गरि कार्यक्रम शुरुवात गरेका थिए । नम्बरीहरुबीच एकापसमा अति घनिष्ठ सम्बन्ध हुने भएकाले भेटपछि उनीहरुमा खुशीको सिमाना नै थिएन ।
कार्यक्रममा विगत ३० वर्षको तीता मिठा अनुभव पांच घण्टाभित्र कैद गर्न सबै आतुर देखिन्थे । त्यसमा नाचगान र केहि औपचारिक कार्यक्रम पनि थियो । अध्यक्ष मल्लले कहिले हसाउंदै, कहिले निकै गम्भीर भएर आफ्ना विचार राखे । उनले चांडै नम्बरीका लागि विधान तयार हुने पनि बताए । साथै उनले कार्यसमिति सदस्यहरु र कार्यक्रम सफल बनाउन मद्दत गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
कोषाध्यक्ष विक्रम गुरुङले संक्षिप्तमा आय व्यय विवरण राखे । प्रकाश गुरुङले प्रोजेक्टर मार्फत पोखरा ब्रिटिश क्याम्प र हङकङमा ३० वर्ष पहिले ट्रेनिङको दौरान खिचेका पुराना झण्डै ९० वटा फोटो प्रदर्शनी प्रस्तुत गरेका थिए । साथै उनले नम्बरीको महत्वबारे पनि प्रष्ट्याए ।
कार्यक्रममा हालै युनिभर्सिटी र कलेजबाट उच्चशिक्षा हांसिल गरेका कविता थापा र सुमित्रा मल्ललाई वधाई दिइएको थियो ।
महासचिव कुमार घलेले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रममा कुल थापाको जोडी अनि नारायण गुरुङ र रणबीर राईको प्रस्तुतिले धेरै ताली बटुल्यो । विनोद गुरुङ र कमला गुरुङको जोडीले तीस वर्ष पहिलेको क्षण स्मरण गर्दै नाच प्रदर्शन गरेर माहोल रोमाञ्चक बनाए । विक्रम गुरुङको पहिलो गायन प्रयास राम्रो थियो । नेपालबाट आएका कलाकारहरुको प्रस्तुति पनि कार्यक्रममा थियो । खाना र पेय पदार्थ प्यालेसले व्यवस्था गरेको थियो भने फोटोग्राफस बन्दोबस्त श्याम पुनले गरेका थिए ।